Indlela yokuhumusha, uma kwenzeke ephusheni ukulahlekelwa indandatho, ukubandakanya noma ngamatshe?
Iyini iphupho, lapho ngilahlekelwa khona indandatho, isithembiso?
Kungani uphupha ukuthi ulahlekelwe indandatho ephusheni? Ukuchazwa kwamaphupho
Awuzange ucabange ukuthi indandatho ayiyona nje imihlobiso emihle yezandla zethu, kodwa futhi isibonakaliso esinamandla ezinkolelo-ze kanye nabahumushi bamaphupho. Ikakhulukazi ukukhathazeka lezo zikhathi, uma ephusheni ukulahlekelwa indandatho. Ingabe leli phupho lingabhekwa njengesibonakaliso esibi? Yini ongayilindela esikhathini esizayo esiseduze emva kwalokhu iphupho? Izimpendulo zale mibuzo zizonikezwa izincwadi ezithandwa kakhulu.
Kungani uphupha ukulahlekelwa indandatho?
Le ndaba, kaningi, ibonisa izinguquko ezinkulu empilweni yakhe, okuyiqiniso, hhayi ngaso sonke isikhathi. Lokhu kungabonisa ukunganeliseki nomuntu okhethiweyo, isifiso sokungena ebuhlotsheni obusha noma nje ukubhubhisa okwamanje.
Ezinye izincwadi zephupho zihumusha lesi sithombe njengesixwayiso mayelana nosongo lokulahlekelwa kwezimali. Kungenzeka ukuthi emva kwalokhu iphupho, umuntu olalayo uyolahlekelwa isimo sengqondo sangaphambili salabo abangani nabangane abadlala indima enkulu empilweni yakhe.
Kwezinye izincwadi zephupho, ungathola incazelo ejulile, ngokusho ukuthi ukulahlekelwa kwendandatho kusho ukuthi maduze kuzodingeka ulahlekelwe okuthile okubalulekile empilweni yangempela. Lokhu kulahlekelwa kuyoba nomthelela ojulile ekugcineni kwakho kanye nobuhlobo bomuntu siqu.
Ukulahlekelwa kwendandatho ephusheni kungasho ukungahambisani nobuhlobo bomndeni, ukuphikisana nabaphathi noma osebenza nabo. Kubantu bomndeni, lesi sakhiwo singabonakalisa ukuhlambalaza okukhulu nomndeni. Qaphela noma yikuphi ukuphikisana nokucaciswa kobuhlobo, ngoba akukho okuhle okuzophela lapho. Uma umhlobiso wawunamathele ngamatshe amancane - linda izinyembezi.
Uma owesifazane ongashadile elahlekelwa indandatho ephusheni, okhethweni lwamanje noma oluzayo luzomdumaza kakhulu. Ngokuqinisekile, ubuhlobo nomuntu ngeke kuholele kunoma yini enhle.
Kubantu asebekhulile, leli phupho lingabonisa ukuthi impilo yabo ibuthakathaka kakhulu, kungenzeka ukuthi ngesikhathi esifushane lo mphupho ugula kakhulu.
Amadoda leli phupho liyisixwayiso mayelana nobunzima bezezimali. Ngaphezu kwalokho, isikhathi esithile ngemuva kokuba sibone, noma ngabe kunjalo, unganiki muntu ngesikweletu, ngoba cishe kungenzeka ukuthi ahlukanise imali nhlobo. Ukulahlekelwa ephusheni indandatho enhle - isibonakaliso sokukhashelwa engxenyeni yomngane omkhulu.
Lahleka indandatho yomshado ephusheni: zizokwenzenjani izincwadi zephupho
Njengoba indandatho yomshado ibonisa uthando olungapheli, uthando olulodwa, umshado oqinile futhi ojabulisayo, ukulahlekelwa kwalo mhlobiso ephusheni ngeke kubikezele noma yini enhle.
Uma umuntu oshadile noma oshadile elahlekelwa indandatho ephusheni, lokhu kungachazwa njengokungcwatshwa kokuqala komuntu okhethiwe noma ngisho nokushiya umndeni. Kubantu ababone le ndaba, bayelulekwa ukuba banakekele ukuziphatha komlingani wabo, ngoba kungase kube kuhle ukuthi unomuntu ohlangothini lwakhe. Amantombazane - lokhu kungaba isibonakaliso sokuthi maduzane uzozwa ukuhlambalazwa ekhelini lakhe noma isifiso somthandi. Kungenzeka ukuthi kube khona inselelo ebuhlotsheni bakho isikhathi eside, kodwa uye wavala amehlo akho kakhulu. Zama ukuqonda ngokuqonda izimangalo nezikhalazo ekhelini lakho bese, mhlawumbe, uzobuyisa uthando nenhlonipho yalo muntu.
Ukuze ulahlekelwe indandatho ephusheni akuyona isibonakaliso esihle kakhulu, kodwa ngisho nokuhumusha okungenhla ungafunda iseluleko esiwusizo esizokuqondisa endleleni yangempela. Sithemba ukuthi uzoqonda konke ngokufanele futhi udwebe iziphetho ezidingekayo.
Kusho ukuthini ukuphatha amazinyo ephusheni?
Mirror amaphupho noma yini ongayilindela empilweni emva kwamaphupho ngesibuko
Ukubona igazi emphunjini ephusheni, lokho kusho ukuthini?
Namathisela i-sauce yethanga
Amakhukhi ayenziwe nge-sinamoni
Inkukhu isaladi nge-sauce ushizi
Kungenzeka yini ukukhulisa i-orchid wena?
Indlela yokukhulula ubuhlungu besisu emilenzeni?
Isaladi nge-avocado nama-mushroom
Ama-masks wezinwele eziqinisekisayo
Yini enempilo yokusikwa kwama-Indian?
U-Kurt Vonnegut, biography
Ama-muffin nge-sweet cotton wool
Amakhukhi we-Chocolate nge sinamoni nama-clove
Indlela yokwenza umuthi omuhle?
Ikhekhe le-Easter ebhokisini